Nagu saabsan | Ningbo Yongsheng caday Co., Ltd.
Ningbo YONGSHENG BURASHADA CO., LTD
Waxaan haynaa in kabadan 500 oo nooc oo kaladuwan oo dahab ah.GANACSATADA AAN LEEYAHAY AWOODDA SOO SAARKA BADAN OO SOO SAARKA SANADKANAGU WAA 30,000,000 PCS. OEM / ODM AMARKA AYAA SOO DHAWEYSAN.
Ningbo YONGSHENG BURASHADA CO., LTD waa warshad warshadeed oo ku takhasustay soo saarista noocyo kala duwan oo burush ah, qalabka musqusha caag ah iyo muraayadaha qurxinta. Warshadu waxay ku taalaa waqooyiga duleedkeeda magaalada Ningbo, oo u dhaw goob muuqaal dalxiis oo Jiulong Lake Dalxiis.
Warshadda ayaa baaxadeedu tahay laba iyo labaatan kun iyo laba boqol oo mitir oo laba jibbaaran. Qalab horumarsan, Nidaam maarayn adag oo hufan. lt waxaa isku darsaday Wax soo saar, Kormeer Tayo ah, Iibin, Saad qalab farsamo ah, Bakhaarro, iyo alaabooyin cusub oo gabi ahaanba ka kooban lix waaxood oo gaar ah. Si loo gaaro hadafka "u dhaqmo sidii hogaamiye warshad", waxaan abuureynaa isha horumarka, waxaan hagaajineynaa fikradaheena xirfadeed, hal abuurnimo iyo warshadeed si aan ugu tartano duurka. Hadda, macmiilkeennu wuxuu arki doonaa "Xiriirka guuleysta / guuleysto" midba midka kale.
Waxaa ogolaaday by ISO9001 laga soo bilaabo 2003, waqtigaaga amarkaaga iyo waqtiga aad bixinayso waxaa damaanad qaadaya khibradeena farsamada iyo 550 shaqaale xirfad leh oo la shaqeeya Yongsheng, Waxaan haynaa labaatan iyo laba mashiin oo la isku duro oo leh 9 gacmood oo farsamo leh, hal xarig oo daabacan otomaatig ah, Afarta daah oo miiska lagu buufiyo miiska lagu buufiyo. Labaatan iyo lix mashiinno lagu daadinayo, shan mashiinno daabacaadda shaashadda ah, Saddex mashiinka kuleylka kulul, Lix feedh ah, Afar mashiinno lagu kaydiyo, hal mashiinka xakamaynta tooska ah iyo lixda baakad xirmo. Sidoo kale waxaan leenahay koox horumarinta caaryada noo gaar ah si aan u horumarin karno waxyaabo cusub si wadajir ah. Waxaan u dhoofinaa wadamada dhamaan erayga USA, Europe, Japan, Bariga Dhexe, South East surely Xaqiiqdi markasta waad heli kartaa ujeedkaaga aad jeceshahay. Waxaan si kal iyo laab ah idiinku casumeynaa inaad maanta nagala soo qeybgashaan waxaana rajeyneynaa waxa aan noqon karno kuwa wax ku biiriya mustaqbalkaaga guul iyo barwaaqo. Fadlan si xor ah u nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan alaabteenna ama wixii su'aalo kale ah!